Okwamanje, asikwazi kugcwale umlomo ukuthi umdlalo ethandwa kakhulu emhlabeni wonke jikelele ekhukhwini izilo isibe Pokemon Hamba. Idlalwa kanjani ke ezisekelweni ezahlukene, banesithakazelo amashumi ezinkulungwane abasebenzisi nsuku zonke. Ukulinganisa ezahlukene, futhi kangcono ngamunye wazi yonke imininingwane, ukuze bakwazi ukwenza ngemva kokuqala yimpumelelo.
Isici esiyinhloko udumo kwakuwukuthi ukuthi abantu badinga ukusebenzisa emhlabeni wangempela ne zobuchwepheshe zabo Pokemon Hamba. Idlalwa kanjani kule phrojekthi, kuqala sabuza abantu emhlabeni wonke, kodwa kungakabiphi baba izindlela ezaziwa. Umuntu nje kudingeka ukugijima ku idolobha langempela nedivaysi digital, lapho kukhona uxhumano lwe-Inthanethi. inkomba Ngenxa isikhundla indawo esikrinini uboniswa isimo sangempela emhlabathini. Esikhathini esizayo, abasebenzisi ezifuywayo akhishwa, ukuqeqesha ngenxa yokuziphendukela kwemvelo nezinye ukwandisa amandla. Isigaba sokugcina kuyimpi ukulawula endaweni ngesimo amakamelo. ihholo ngalinye unesibopho indawo yayo, futhi kungenzeka ukubeka eyodwa kuphela Pokémon sokuvikelwa. Ukuze ngenxa yenzuzo nokulawula izindawo, izigidi nabalandeli emhlabeni jikelele ukusebenzisa noma iya ngezinyawo amakhilomitha yokuqhelelana kwezindawo ukuzingelwa ephaketheni izilo.
Ukufakwa ku "Android" (Part One)
Operation uhlelo "i-Android" umbuzo ngokuqondene nendlela ukudlala Pokemon Hamba, musa kuphakama. Isizathu salokhu kwaba lula ukufakwa, okuyinto anakekela Onjiniyela we "Nintendo" izinkampani Japanese. Okokuqala udinga ukulanda ukuze ifayela lakho le-APK kudivayisi. nemingcele ezengeziwe ithebhulethi noma smartphone kumele ukuvumela ukufaka izicelo hhayi kuphela umthombo oyinhloko. Ungenza lokhu ngaphansi "Khiya isikrini nokuphepha." Lapha-ke linendima okufushane ebalulekile ifayela ukufakwa. Ukuze hhayi ukulahlekelwa lokhu, kungcono ukuya isisetshenziswa-APK Mirror futhi uthole unentshisekelo umdlalo. Bese ubuka version bese ukhetha kwamuva. Lokhu kuyoba isiqinisekiso esongeziwe ukufakwa ephephile. Kulokhu, kuyoba nezinkinga nge ukuqala ukudlala Pokemon Hamba kanjani, ngoba Uyoletha imiyalelo kokuqala.
Isethaphu Iqhutshwa "Android"
Ngakho ephakama kungabaza okwengeziwe, ukuthi benzeni Pokemon Hamba, indlela ukudlala, kumelwe ngokuqinile landela imiyalelo. Faka e Centre isaziso bese uchofoza ngaphambilini APK-fayela. Ukufakwa uzoqala, okuzokwenza kuthathe amaminithi ambalwa. Linda kuze kube yilapho inqubo sesiphelile futhi uhlole umdlalo ukufinyelela ikhamera yakho, inkumbulo, futhi GPS. Lezi nemingcele eziyisisekelo, ngaphandle lapho iphrojekthi ilahlekelwa nencazelo yalo. Yiya iphuzu isicelo, ukuthola "GO Pokemon" bese uhlole izimvume khona. Uma bengekho, kufanele babuze imikhaza yabo evamile. Le ndlela yokufaka has eyodwa ethile - isibuyekezo mathupha. Uma inguqulo entsha uyaphuma, musa ulahleke futhi uthole indlela entsha ukudlala Pokemon Yana "Android". Vele ulandele wonke umsebenzi nge ukufakwa yesikhulumi futhi.
Apple kuyinto ejwayele ngaphezulu ukuvala kumadivayisi abo, ngenxa yezinkinga ne ukufakwa kwe-game amaphilisi kanye Smartphones lokhu umakhi ngaphezulu. Ukuze uqalise ngendlela ekhethekile ibhekwa ophumayo Apple ID yakho kubhaliswe. Iya izilungiselelo eziyisisekelo, khona ngaphansi "Ulimi nesifunda" ukukhetha omunye amazwe amathathu - US, e-Australia noma iNew Zealand. Kufanele kuqashelwe ngokushesha ukuthi abadlali ngifuna indlela ukudlala Pokemon Hamba ngaphandle GPS, umane ukuchitha isikhathi. Ubopha endaweni amalungiselelo saziso kuwo wonke amadivayisi. iziqondiso ezengeziwe ngoba umdlalo Download App Store. Ngakho ingabe kwenzeka kanjani ngokugcwele ekulandiseni, umdlalo Izokwazisa ukudala i-akhawunti entsha. Yenza lokhu kuphela komunye e-mail ukuthi bebengakaxoxi asetshenziswa enkonzweni.
Qhubeka ukufakwa kumadivayisi e-iOS
Uma esibekiwe e-mail, kufanele ugcwalise ikheli elisha (yasungulwa) yokuhlala kuleli zwe abakhethiwe, into "Ulimi nesifunda." Vele uye ibalazwe yezwe on enetheni bese uthole ikhaya real nenani elicacisiwe. Inkomba esifundeni kumelwe futhi sibe khona futhi eze kuleli zwe. Uma ungaphenduki, ke umbuzo ungaqalisa kanjani ukudlala Pokemon Hamba, qinani ukuhlobana, futhi kufanele ngikwenze futhi. Nge-akhawunti entsha, ungafaka ngokuphepha umdlalo badlulele akhawunti yakho endala njengenjwayelo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi iphrojekthi angeke ivuselelwe, nakuba uzosebenza mode evamile. Izoqala nini le nguqulo entsha kumele vele uye esungulwe American Apple ID kanye futha. Ngaphandle US yasebhange ukuthenga ikhadi ngaphakathi for imali yangempela kuyoba ngiyaphupha, kodwa kungekho ukulahlekelwa okukhulu. Zonke lezi yokuntula kukhona ngenxa yokuthi CIS mdlalo badedelwa okwamanje ngokusemthethweni. I abathuthukisi sanda uhlu izindawo, ngoba maduze izotholakala wonke amazwe emhlabeni.
Ukufakwa ku-PC (indlela yokuqala)
Abanye abantu bakhetha laptop kuka-smartphone noma ithebhulethi. Kubo, indima eyinhloko onolwazi ukuthi ukudlala Pokemon Hamba ku-PC yakho. Ukuze uqale, kufanele ufake Nox App Player bese ulanda aziwayo kakade kusukela isihloko APK-fayela. Cacisa indlela eya folda Emulator ne ukufakwa umdlalo bese uyifake ngale ndlela. Qala umdlalo, kodwa musa vele uye ezweni digital ekhukhwini izilo. Oku ngokusebenzisa umyalo Geocode, khetha indawo ebalazweni emhlabeni, lapho ufuna ukuzingela Pokemon. Chofoza endaweni igundane bese ucindezela OK. Uma loku kungentiwa, umsebenzisi uyoziphonsa ngokuzenzakalela eSydney, futhi ushintsho endaweni ekuvimbeni akhawunti developers, ngoba bakholwa ukuthi ukukhwabanisa. Iphuzu lokugcina ukungena ubudala bakho, bese uxhuma esebenzisa i-Akhawunti e-Google noma ehlukile e-game akhawunti.
Uma ufuna ukufaka iphrojekthi ku-Windows ke odinga ukukwazi mayelana indlela yesibili kanjani ukudlala Pokemon Hamba. BlueStacks-ku isicelo kwenziwa izinyathelo ezimbalwa futhi kudinga ukunakwa. Okokuqala udinga ukulanda Simulator uqobo, futhi uma isivele kukhompyutha yakho, ngalesosikhathi enyula it ngokuphelele, iqalise ikhompyutha bese faka. Manje, kule "Qala" imenyu ngifuna umyalo "Gijima." Ukuze izinguqulo kamuva of the regedit isicelo yesistimu yokusebenza siphela iqonde, asikho isidingo ukucinga ngokusebenzisa umyalo. Esikhathini Registry Umhleli, Uzodlula indlela HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SOFTWARE \_ BlueStacks \_ Izivakashi \_ Android \_ zokulungiselela ukhetho futhi kukhona "Ikhamera" ukushintsha ukubaluleka komunye zero.
Khona-ke udinga ukufaka ngaphakathi Emulator Kingroot indlela ukulungisa iphutha. Ngemva ukubonakala "Zama" inkinobho bachubeka, futhi uma ifinyelela ku-100%, bese uqale kabusha Emulator. isethi Landelayo Lucky Patcher futhi ngaphakathi Simulator bese uvumela ukungena. Hambisa i-APK-ifayela kusuka Inkohliso izicelo GPS "Imibhalo" kukhompyutha. Buyela emuva isicelo zokugcina ifakiwe, futhi kuyoba khona umsebenzi "kabusha". Vula Explorer, kungaba ucacise indlela eya i-APK-ifayela ukudala GPS inkohliso. I intuthuko ukufakwa uyavuma, kodwa musa kabusha PC.
Azisekho unenkinga nge indlela ukudlala Pokemon Hamba ku-PC yakho, kufanele ngokuqinile landela imiyalelo. Shiya BlueStacks amathebhu ezimbili kuphela - "Siyakwamukela" futhi "Android". Ngesikhathi yokugcina yalezi kabusha Emulator futhi. Manje ukufaka mdlalo isivele BlueStacks. Manje qala Lucky Patcher, libiza umsebenzi isihambile yokusesha bese ubheka uhlelo lokusebenza GPS Inkohliso. Ngemva kokwethulwa yayo kusebenze ukuguqulwa uchwepheshe futhi uvule imephu vele ukhethe indawo wazifunela ekubambeni ephaketheni izilo. Jikela figurehead GPS, ungakwazi manje uphume Lucky Patcher. kulungiselelwa "Android" kuyoba isenzo sokugcina. Khubaza i-Google ukufinyelela idatha indawo, ukuze ngingasebenzisi wathola iqhinga. Manje ungaqalisa iphrojekthi yakho futhi ujabulele ukuzingela nganoma yisiphi isikhathi.
Uma kwenzeke ukufaka ke kukhona kuqala umbuzo yini okufanele uyenze futhi kanjani ukudlala Pokemon Hamba. Hyde iqala emuva kuloko lokudzingekako kute ukuhambisa emhlabeni futhi unaka noma ikuphi ukunyakaza third-party. Uma amagatsha esihlahla lihamba, kusho ukuthi kukhona isilwane ezifihliwe, iya khona ukuze bambambe. Pokemon abahlukahlukene ibanjwe imvamisa yazo zonke izinhlobo. nezidalwa ezingavamile futhi enamandla bheka nzima kakhulu kunalokho ejwayelekile Pidgey, Vidla futhi Caterpie. Noma kunjalo, ukuzingela eziphikelelayo uyohlale esinika umphumela oyifunayo. Ngo ekhoneni lesidla eliphansi ngokuvamile aba amathiphu esondela endaweni lapho ezifuywayo ezifihliwe, kodwa ibanga ethize, ngisho isiqondiso lapho uhlangothi nje asipheli. Kube nenkinga okubalulekile kwemvelo elenza Pokémon Sinemandla. Ifomu lesibili nelesithathu njalo has ongakhetha ezinamandla kakhudlwana futhi kusheshe ukufunda ukuhlaselwa ezahlukene. Lapho ekubambeni isilwane njalo sisikhumbule lesi seluleko futhi ubone engafezeka ekuthuthukiseni esizayo. Qala ukuqeqeshwa naye eHholo eduze, hlanganani nabangani banqobe yonke indawo yabo. Into esemqoka - unelungelo lokusungula iphrojekthi idivayisi ekhethiwe, bese konke kuyofika isikhathi.